Manamafy ny hidim-baravarana amin’ny fahalalahan’ny media i Ozbekistan sy i Kazakhstan · Global Voices teny Malagasy
Lasa sakana isan'andro amin'ny asa fanaovan-gazety ny fandraràna, ny fitsikilovana ary ny sivana.
Voadika ny 09 Desambra 2021 3:56 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, Español, українська, English
Mametra ny fidirana amin'ny vaovao any Ozbekistan sy Kazakhstan ny Spyware (rindrampitsikilovana) sy ny rafitra fanaraha-maso media. Sary nahazoana alalana: ​​Blogtrepreneur (CC BY 2.0).
Lasa mihasarotra hatrany ny maha-mpanao gazety ao Ozbekistan sy Kazakhstan. Tamin'ity volana ity monja, tsy navela niditra tao Ozbekistan ilay mpanao gazety vahiny Agnieszka Pikulicka, lasibatry ny sampan-draharaham-piarovan'ny fanjakana ao Kazakhstan ireo mpanao gazety sy mpikatroka, ary nampiasa fitsipika vaovao momba ny ‘famantarana lahatahiry’ ho fitaovana amin'ny sivana fahoany fahoany ny governemanta.
Niverina tany Polonina indray i Pikulicka. Nentin'ny sampan-draharaham-piarovana namonjy ny seranam-piaramanidina ity mpanao gazety ity, izay efa nahazo alalana tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny firenena ary nahazo fahazoan-dalana hipetraka ao Ozbekistan nandritra ny telo taona, rehefa tsy navela niditra tao amin'ny sisintanin'i Kazakhstan-Uzbekistan. Voatanisa ho olona tsy ankasitrahana (persona non grata) izy ary voaràra tsy ho ao amin'ny firenena.
Nilatsaka ny fandraràna taorian'ny fanerena am-bolana maro tamin'i Pikulicka, izay miasa ho mpanao gazety mahaleotena ary manoratra boky momba an'i Ozbekistan. Tamin'ny volana febroary, nolavina ny fanavaozana ny fanomezan-dalana azy ary niampanga ampahibemaso ny tompon'andraikitra iray ao amin'ny Ministeran'ny Raharaham-bahiny ho nanao fanerena sy sotasota ara-nofo azy izy. Nihemotra sy niala tsiny ary nanome alalana an’ilay mpanao gazety avy eo ny minisitera taorian’izay. Tamin'ny volana Jona anefa, niharan'ny fanerena tahaka izany indray i Pikulicka.
Nilaza i Pikulicka fa taratry ny fironana ao Ozbekistan ity tranga ity, izay nafenin'ny Filoha Shavkat Mirziyoyev tamin'ny fikasany ho amin'ny fanavaozana. “Indrisy fa tahaka izao no ho fe-potoam-piasana faharoan'ny governemantan'i Mirziyoyev,” hoy izy tamin'ny Eurasianet.
Na izany aza, toa tapaka tanteraka ny fanapahan-kevitra. “Mbola tsy nanambara ny antom-pandraràna ny idirako ny manampahefana Ozbeka, saingy fantatro fa nandefa fangatahana ofisialy hahazo vaovao ny Masoivoho Poloney, ary mbola miandry valiny izahay,” hoy i Pikulicka tamin'ny Podrobno.uz nandritra ny tafatafa.
Tamin'ny resadresaka niaraka taminy, nanasongadina ireo sakana natrehiny tamin'ny dingana lava sy manorisory ho fankatoavana ny mpanao gazety ao Ozbekistan i Pikulicka. Amin'ny odidina hafa, tsy dia nitaky firy ny manampahefana manomboka any Libanona ka hatrany Afganistana, .
Taorian'ny fandraràna, nanantitrantitra ny tsy ampoizina amin'izay mety hanjo azy izy, satria tsy mba nampitandremana mihitsy izy fa eo ambany fanaraha-maso. “Tsy nosakanan'ny polisy mihitsy aho — tsy nisy nilaza tamiko fa nandika lalàna aho,” hoy i Pikulicka tamin'ny Podrobno.uz.
Apple sy Facebook any Kazakhstan
Tamin'ny 23 Novambra, nametraka fitoriana an'ny Vondrona NSO miorina any Israely, orinasa rindrambaiko nanao ny rindrampitsikilovana nampiasaina hikendrena ireo mpanao gazety, mpikatroka, ary mpanao politika manerana izao tontolo izao ny Apple. Nanambara ny fisiana hatrany amin'ny fanaraha-maso tohanan'ny fanjakana maneran-tany ny fanadihadiana ny Tetikasa Pegasus tamin'ny Jolay 2021.
Mandritra izay fotoana izay, nandefa mailaka ho an'ireo mpiserasera ao aminy izay mety ho kinedrin'ny rindrampitsikilovana Pegasus ny Apple. Aisana Ashim, mpanorina ny gazetiboky anjotra The Village Kazakhstan, nandefa ny mailaka voarainy anjotra, nilaza fa “[ireo mpanafika tohanan'ny fanjakana] dia mety mikendry anareo tsirairay noho ny maha-ianao anao na ny zavatra ataonao.” Mpanao gazety sy mpikatroka am-polony hafa no nitatitra fa nahazo mailaka mitovy avy amin'ny Apple.
Herinandro vitsy monja talohan'izay, nanambara ny governemantan'i Kazakhstan fa nanao fifanarahana tamin'ny Meta, fantatra taloha amin'ny anarana hoe Facebook, izay hahafahany miditra amin'ny rafi-pitateram-botoaty ao amin'ny media sosialy.
Nolavin'ny Meta anefa izany, izay nilaza fa mifanaraka amin'ny firenena rehetra ny politikan'izy ireo.
‘Famangitana lahatahiry’ — fanivahana mankany amin'ny fifehezana bebe kokoa
Tamin'ny fiandohan'ity taona ity, nandany lalàna vaovao momba ny “famangitana lahatahiry” i Kazakhstan izay mitaky amin'ireo orinasa media sosialy hanaisotra ireo votoaty voamariky ny manampahefana ao an-toerana ao anatin'ny 24 ora fa mety hanimba ny ankizy. Mety hakatona ny serivisin'izay orinasa tsy manara-dalàna.
Nohamarinin’ny tompon’andraikitra ny volavolan-dalàna tamin’ny filazana fa hiaro ny zon’ny ankizy izy.
Naneho fanoherana ny fanaraha-maso sy ny fifehezana votoaty toy izany taloha ireo goavamben'ny aterineto, saingy mety ho lasa sakana tsy azo dinganina rahatrizay ny lalàna namboamboarina ao an-toerana.
Lasa lohahevitra mafana any Azia Afovoany ny famangitana lahatahiry.
Tamin'ny 24 Oktobra, nandresy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena faharoa i Mirziyoyev nahazo 80 isanjaton'ny vato. Nilaza ireo mpanara-baovao fa tsy misy fifaninanana tena izy ny fifidianana ary nanasongadina fandikan-dalàna maromaro.
Andro maro taty aoriana, tamin'ny 3 Novambra, nosakanan'ny sampan-draharaha mpandrindra ny fifandraisana lehibe indrindra ao amin'ny firenena, Uzkomnazorat ny fidirana amin'ny tolotra antserasera maro noho ny tsy fananana birao voasoratra anarana ao amin'ny firenena. Tsy azo nidirana nandritra ny adiny iray teo ho eo ireo fampiharana malaza fandefasan-kafatra sy mpamatsy media sosialy toy ny Telegram, Facebook, Instagram, ary LinkedIn.
Nandroaka haingana ny filohan'ny Uzkomnazorat i Mirziyoyev noho ny fanapahan-keviny “mitokana sy diso”. Volana vitsy lasa anefa izay, nanasonia politika vaovao momba ny famangitana lahatahiry ho lalàna ny filoha, izay mitaky amin'ireo mpanome tolotra aterineto mba hitahiry ara-batana ny lahatahiry manokan'ny olom-pirenena Ozbeka ao amin'ny firenena.
Raha noraisin'ireo mpanara-baovao sasany ho toy ny “fandresena” ny famerenana ny fidirana amin'ny tambajotra sosialy, dia toa fampisehoan-kery nataon'i Mirziyoyev ny zava-niseho, fomba iray hampahafantarana ny besinimaro fa mifehy ny tambajotram-pifandraisana ao amin'ny firenena sy ny fidirana amin'ny fampiharana media sosialy malaza izy.